I-Safest Muscle Booster Supplement: Urolithin A (UA) Powder AASraw
/Blog/Ithala/I-Safest Muscle Booster Supplement: I-Urolithin A (UA) Powder
ezaposwa ngomhla 06 / 26 / 2022 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
1. Ziziphi iiMveliso ezinokusinceda ukuba sikhulise i-Muscle Fast?
2. Xa kuthelekiswa ne-Steroid, ziziphi izinto eziluncedo kwi-Urolithin A (UA)?
3. Yintoni i-Urolithin A (UA)?
4. Indlela i-Urolithin-A Work on Boosting Muscle?
5. Apho Ukuthenga Eyona Urolithin A (UA) Powder Online?
6. Indlela yokusebenzisa i-Urolithin A (UA) Umgubo?
7. Ziziphi iziphumo esinokuzibona emva kwe-Urolithin-Powder?
Enye yeenjongo eziphambili zabakhi bomzimba kunye nabadlali kukwandisa ubunzima bemisipha kunye nokuphucula ithoni, kunye namandla, emisipha. Kunokuba nzima ukufikelela kwesi siphumo ngokwenza umthambo okanye iinkqubo zoqeqesho kuphela. Ukucwangciswa kokutya okungqongqo, ukusetyenziswa kwe-macronutrients ebalulekileyo, kunye nokusetyenziswa kwezinto ezithile zangaphambi kokuzilolonga kunye ne-post-workout supplements ziyafuneka ukuze kubekho ukukhula okwaneleyo kwemisipha kwixesha elimiselweyo.
Zeziphi iiMveliso eziSinokunceda ukomeleza izihlunu ngokukhawuleza?
Zininzi iindlela zokuphucula ukukhula kwezihlunu zakho kwaye ubone utshintsho olubalulekileyo kumzimba wakho, eyona nto ibalulekileyo kukutya iiproteni ezaneleyo. Ukusetyenziswa kweeprotheyini ngesidlo ngasinye kunokuzuza ukukhula kwemisipha yakho, njengoko i-amino acids evela kwezi proteni inceda ukulungisa umonakalo wemisipha kunye nokuzalisa iiprotheyini ezigciniweyo kwiimisipha, emva kokuzivocavoca okukhulu. I-Carbs kufuneka igwenywe ngokubanzi, ngaphandle kokuba emva kokuzivocavoca xa ukukhula kwemisipha kuyinjongo.
Enye indlela ekhawulezayo yokukhulisa ukukhula kwemisipha kukusetyenziswa kwe-steroids. Bahlala befumana igama elibi njengoko ezinye zeentlobo ze-steroid zivaliwe ukuba zisetyenziswe nguwuphi na umakhi womzimba okanye umgijimi ngabasemagunyeni abahambelanayo. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindidi ezininzi ezikhuselekileyo nezisemthethweni ukuba zisetyenziswe, eziye zangqinwa ukuba ziluncedo ngamaqhekeza amaninzi ezifundo zesayensi.
I-Steroids ingasetyenziselwa phezulu, okanye ithathwe ngendlela yepilisi okanye isitofu, ngokuthe ngqo kwi-muscle. Injongo yezi steroids ayikokwandisa kuphela ubungakanani bemisipha, ngenxa yoko kubangele ukukhula okubonakalayo kwemisipha kodwa nokwandisa amandla emisipha. Abakhi bomzimba abasebenzisa i-steroids banika ingxelo yokuphucuka kokuqina kunye nokunyamezela kwindawo yokuzivocavoca, nto leyo ngokuqinisekileyo idibanisa ekuthandeni i-steroids.
Xa kuthelekiswa neSteroid, zeziphi izinto eziluncedo kwiUrolithin A (UA)?
Ukuba ibala elijikeleze i-steroids alikho kuwe kwaye ujonge enye indlela, ngoko ke Urolithin A isongezelelo kunokuba kufanelekile ukujonga. I-Urolithin i-powder inamandla kwaye ikhuselekile i-muscle booster, izibonelelo eziye zaxhaswa bubungqina besayensi obubambekayo. Izibonelelo zolu ncedo lwe-muscle ziye zaphindwa kwaye zavavanywa kwizifundo ezininzi ezahlukeneyo, kwaye ngamnye uxhase inzuzo eqikelelwayo.
I-anabolic steroids esetyenziswa ngabadlali banokuphucula ukukhula kwemisipha ngokuphawulekayo kodwa iziphumo zecala zala machiza, ezifana nokunciphisa ubukhulu be-testicular ngenxa ye-testicular atrophy kunye nokungabikho komntwana, ngaphezu kweenzuzo zeyeza. Yingakho kubalulekile ukukhangela ezinye iindlela, kwaye i-Urolithin A ine-potency efanayo okanye eyongeziweyo, xa kuthelekiswa, kunye nokuphucula ubungakanani bemisipha. Nangona kunjalo, iziphumo ebezingalindelekanga ze-Urolithin A azisondeli nokuba zinzulu njengeziphumo ebezingalindelekanga ze-steroids.
Urolithin A. sisongezelelo esikhuselekileyo nesisebenzayo esine-anti-aging, metabolic, neuroprotective, kunye neenzuzo zokuchasa ukutyeba. Ngokwezifundo ezenziweyo ukuvavanya izibonelelo zesongezelelo, kukhuselekile ukusetyenziswa kwabantu. Ngaphezu koko, akukho tyhefu okanye iziphumo ezibi ezixeliweyo, ukuza kuthi ga ngoku. Ukusebenzisa imveliso echanekileyo kwidosi efanelekileyo kunokunceda ukunciphisa umngcipheko wayo nayiphi na imiphumo enokubakho kakhulu.
I-Urolithin A, ukususela ekufumaneni kwayo kwi-2000s, ifundwe ngokubanzi ngenxa yeenzuzo zayo ezifana nokunyusa imisipha kunye nezakhono zokuphucula ukunyamezela. Nangona kunjalo, kukho ezinye izibonelelo ezimbalwa zekhompawundi ezafunyanwa ngenxa yezi ziqwenga zophando, kwaye zikhankanywe ngezantsi:
Ulawulo lweengxaki ze-metabolic
Xa uvavanya isakhono se-Urolithin A yokongeza ukunyusa ukunyamezela kubantu abadala, abaphandi bafumanisa ukuba i-metabolite yanciphisa kakhulu inani le-ceramides kunye ne-acylcarnitine emzimbeni. Ezi zihlala zibandakanyeka kukuphazamiseka kwemetabolism ejolise kwi-mitochondria. Kuye kwagqitywa ukuba i-Urolithin A inokunceda ukulawula ukuphazamiseka kwe-mitochondrial metabolic.
Nangona le nzuzo ye-Urolithin A yongezelela ayinomdla njengoko ikwazi ukunyusa ukukhula kwemisipha, ibaluleke ngokulinganayo. Ngokutsho kophando olwenziwe kwiimodeli zezilwanyana, kwafumanisa ukuba ukusetyenziswa kwe-metabolite kuphuculwe iimpawu ze-Alzheimer's, nangona uphando olongezelelweyo lufunekayo ngaphambi kokuba lusetyenziswe njengendlela eqhelekileyo yokonyango.
I-Urolithin A yaphononongwa ngokubhekele phaya ngezibonelelo zayo zemetabolism xa enye yeenzuzo yafunyanwa ngengozi ngexesha lophononongo olwalusenziwa ukuhlalutya ukusetyenziswa kwe-Urolithin A izongezo ekuphuculeni ukunyamezela kwezihlunu phakathi kwabantu abadala.
Imifuziselo yezilwanyana kwi-fat-fat diet okanye i-HFD yaphononongwa njengoko inikwe isongezelelo se-Urolithin A. I-Urolithin A kwezi mpuku zityebileyo zenza ukuba mdaka kwezicubu ze-adipose ezimhlophe kwaye emva koko, i-Urolithin A ikhuthaze i-thermogenesis ye-brown adipose tissue, ukunyibilikisa amanqatha. I-Urolithin A ayinyibilikisi amanqatha kuphela kodwa yafunyanwa ukunqanda ukufumana ubunzima phakathi kweempuku ezazityiswa i-HFD. Le mpembelelo ye-metabolic kunye ne-anti-obesity ye-Urolithin A powder inokuvula ihlabathi elitsha lamathuba kunye nokusetyenziswa kwe-metabolite.
Yintoni i-Urolithin A (UA)?
I-Urolithin A yi-organic compound eyenziwa kwi-ellagitannins yi-microbiota emathunjini. I-Urolithins ziikhompawundi ze-polycyclic ezinevumba elimnandi eziyi-metabolites ezenziwe kwii-precursors ezifana ne-ellagic acid kunye ne-ellagitannins, ezifumaneka kwiziqhamo zendalo ezifana nerharnati.
Ixolo lerharnati lityebile Urolithin B ngelixa i-Urolithin A ayinayo umthombo othile wokutya. Kunoko, yenziwe ngokuguqulwa kweetannins ezifumaneka kwiziqhamo nge-gut flora. Ukubunjwa kwemithombo yokutya ye-ellagitannins ikhankanywe kwitheyibhile engezantsi. Le mithombo yokutya isebenza njengemithombo engathanga ngqo ye-Urolithin A, phambi kwe-gut microbiota enempilo ekwazi ukwenza inkqubo yokuguqula.
Umthombo wokutya I-Acid ye-Ellagic
Amaqunube amnyama 150
Amaqunube amnyama 90
I-rose hip 109.6
Ijram yejewberry 24.5
Iirubheri ezimthubi 1900
Amantongomane (mg / g)
Iziselo (mg / L)
Ijusi yerharnati 811.1
Iwayini ebomvu ene-Oak ubudala 33
Imbewu (mg / g)
Amaqunube amnyama 6.7
Iirubheri ezibomvu 8.7
Isebenza njani i-Urolithin kwi-Boosting Muscle?
I-Urolithin A ithathe indawo ye-steroids 'kwimarike njengoko ikhuselekile kwaye i-booster yemisipha enamandla. I-Urolithin A ababoneleli bakhuthaza ukusetyenziswa kwesi songezelelo ngenxa yeenzuzo ezininzi zemveliso, eyona nto ibalulekileyo kukukhula kwemisipha. Amandla emisipha, ukukhula, kunye nokunyamezela kuxhomekeke kakhulu kumsebenzi we-mitochondrial kwiiseli. I-Mitochondria yindlu yamandla yeseli, kwaye banoxanduva lokuvelisa i-ATP, eyimali yamandla omzimba.
-Ukuphuculwa kwamandla emisipha kubantu abadala
Njengoko umntu ekhula, amandla emisipha, ubukhulu, kunye nokunyamezela kuncipha kakhulu. Oko kunokutyholwa ngokuncipha kokusebenza kwe-mitochondria kunye nokuqokelelana ngokubanzi kwe-mitochondria engaphumeleliyo. Oku kuncitshiswa kwe-mitophagy kudlala indima ebalulekileyo ekuthinteleni abantu abadala ukuba benze imisebenzi yobomi bemihla ngemihla kunye nemisebenzi. Isisombululo sale ngxaki sifunyenwe yi-Urolithin A powder.
Kwakukho olunye uphando olwenziwa ngenjongo yokumisela umphumo we-Urolithin A kumandla emisipha kunye nokunyamezela kubantu abadala, abafumana ukuncipha komsebenzi we-mitochondrial kunye nobudala.
Ngokwabaphandi abenza ulingo lwezonyango, bekukho isisombululo sokungaphumeleli kwe-mitophagy phakathi kwabathathi-nxaxheba bophononongo, ebonisa ukucocwa kwe-mitochondria engasebenziyo kunye nokuphuculwa kwempilo ye-mitochondrial iyonke. Xa kuthelekiswa neqela elifumene i-placebo, abathathi-nxaxheba banikwe Urolithin A isongezelelo ingxelo yokuphuculwa okubalulekileyo kokunyamezela kunye namandla emisipha emilenzeni nasezingalweni. Kwakukho ukukhathala okuncitshisiweyo kunye nokuphuculwa ngokubanzi kwikhono lokwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
Abaphandi baye baqaphela ukuba isongezelelo se-Urolithin A inokuba yenye indlela yokuphucula amandla emisipha kunye namandla phakathi kwabantu abadala abangakwaziyo ukwenza umthambo ngenxa yempilo yomzimba okanye yengqondo. Ngokutsho kweZiko loLawulo lweSifo kunye noThintelo okanye i-CDC, ukuzivocavoca kwansuku zonke kunokunceda ukulwa nemiba yokuhamba, imingcipheko yokuwa, kunye nezinye iingxaki zokuhamba kwabantu abadala. Nangona kunjalo, xa oku kungenakwenzeka, ukuthatha izongezo ze-Urolithin A kunokuzisa i-mitophagy kumanqanaba aqhelekileyo, ngenxa yoko, ibe nesiphumo esifanayo sokuzilolonga.
-Ulawulo lweDuchenne Muscular Dystrophy
Nangona kunjalo, ngezifo ze-muscular degenerative ezifana ne-Duchenne Muscular Dystrophy okanye i-DMD, umxholo we-mitochondrial weeseli unesiphako kwaye i-mitochondria ekhoyo ayisebenzi kakuhle. Ngaphezu koko, kwi-DMD, i-mitophagy iyancipha kakhulu, eyinkqubo apho imizimba yethu isusa i-mitochondria engasebenziyo kwaye iphinda isebenzise umxholo ukuhlangabezana neemfuno eziphezulu zamandla omzimba.
Olunye lophando olwenziweyo ukufunda iziphumo ze Urolithin I-powder ekukhuleni kwemisipha igxile kwimpembelelo yangaphambili kwi-mitophagy. Abaphandi bafumanisa ukuba ukuxhaswa nge-Urolithin A kuphuculwe kakhulu amanqanaba e-mitophagy, ukuwabuyisela kwisiqhelo kwizigulane ze-muscular dystrophy. Ezi ziphumo zibonwe kwiimodeli zombini zezilwanyana kunye nezifundo zabantu, ezibonisa ukuba i-Urolithin A ingasetyenziselwa ngempumelelo ukulawula iimpawu ze-muscular dystrophies. Ngaphezu koko, abaphandi barekhoda ukunyuka kweepesenti ze-40 kumazinga okusinda kwiimodeli zezilwanyana ezinikwe i-Urolithin A yokuncedisa xa kuthelekiswa nabo bangazange bafumane isongezelelo. Amandla okubamba kunye nokuqhuba amandla anyuke ngeepesenti ze-31 kunye neepesenti ze-45, ngokulandelanayo, kule mizekelo yezilwanyana.
Olunye uncedo olubalulekileyo lwe-Urolithin A supplementation oluphawulwe ngeli xesha lolu phononongo kukuba yanciphisa i-fibrosis okanye i-scarring yentliziyo kunye ne-diaphragm yeegundane ezine-DMD. Le yingxaki ebalulekileyo ye-DMD enokuthi ngoku ilawulwe ngayo Urolithin Umgubo.
Kuphi uThenga eyona Urolithin A (UA) umgubo kwi-Intanethi?
Kukho abathengisi be-Urolithin A abakwi-intanethi abaneewebhusayithi zabo ezizinikeleyo ezinokukhethwa ukuthenga imetabolite. Abathengisi beWholesale bavumela abasebenzisi ukuba bathenge i-Urolithin A powder kwi-intanethi, kunye nokuhanjiswa okufanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo. Aba bathengisi bajongana kuphela nomgubo, kwaye kungekhona izongezo ezenziwe ngale metabolite. Izongezo ze-Urolithin A zingathengwa ngokuthe ngqo kwi-brand oyikhethileyo okanye kwi-Amazon.
Phambi kokuthenga ihoseyile okanye izongezo, kucetyiswa kakhulu ukuba ujonge uphononongo lweemveliso ukuqinisekisa ukuba imveliso yoqobo, enamandla, kunye nesebenzayo iyathengwa. Kukho iidupe ezininzi kwimarike kwaye ngamanye amaxesha, imveliso ethengwayo inokungcoliswa ngezinye izithako okanye i-toxins. Kungcono ukwenza uhlalutyo olupheleleyo lokhuseleko kunye nokucoceka kwe-Urolithin A powder ngaphambi kokuyalela nokuba yincinci encinci.
Usetyenziswa njani umgubo weUrolithin A (UA)?
I-Urolithin A supplement ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nomgubo okanye i-capsules ye-gel ethambileyo. Ukuodola ngokuthe ngqo kwi-Urolithin. Umthengisi unokwenza kube lula kuwe ukuba uzikhethele uhlobo olufanelekileyo lokongeza. Nje ukuba ifom imiselwe, kubalulekile ukuba uzikhethele idosi efanelekileyo. Kubalulekile ukukhumbula ukuba i-Urolithin A powder kufuneka ithathwe kanye kuphela ngosuku, kunye ne-dose nganye malunga ne-500mg.
Kukho imithombo yokutya emininzi ye-Urolithin A kodwa akwanelanga ukutya ukutya okutyebileyo kwi-precursors ukuya kwi-Urolithin A. Kufuneka kubekho iintlobo ezimbini zebhaktiriya kwi-gut flora ukuze i-ellagitannins ifakwe kwi-Urolithin A. Ezi zimbini iintlobo zezi, I-Gordonibacter pamelaeae (DSM 19378T) kunye neGordonibacter urolithinfaciens (DSM 27213T).
Ukuba ezi ntlobo azikho kwi-flora yamathumbu, ngoko umntu ochaphazelekayo akayi kuba nemveliso ye-Urolithin A emzimbeni. Abantu abanjalo kufuneka bathathe izongezo ukwenza ukusilela kokuguqulwa kwe-Urolithin emzimbeni.
Zeziphi iziphumo esinokuzibona emva kwe-Urolithin-A powder?
Urolithin I-A ibonakaliswe, ngophando lwezenzululwazi kunye nezifundo, ukuba nefuthe elichasayo lokuguga kumandla omzimba, ubungakanani kunye nokunyamezela. Zonke izibonelelo zixhaswa bubungqina benzululwazi kwaye ixesha elincinci apho ezi zifundo zenziwa iinyanga ezine. Izifundo zathatha iinyanga ezine okanye ngaphezulu, kwaye abaphandi abaninzi bathi izongezo ze-Urolithin A zidinga ubuncinci iinyanga ezine ukuvelisa i-mitophagy kunye nezibonelelo ze-metabolic.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. I-Urolithin A Inciphisa i-Nephrotoxicity ye-Cisplatin-Induced in Inhibiting Renal Inflammation kunye ne-Apoptosis kwi-Experimental Rat Model. J Pharmacol Exp Ther. 2017;363(1):58-65. doi:10.1124/jpet.117.242420.
 "Isaziso se-FDA GRAS GRN No. 791: urolithin A". Ulawulo lokutya kunye neziyobisi lwase-US. 20 December 2018. Ibuyiselwe 25 Agasti 2020.
Landete JM (2011). "I-Ellagitannins, i-ellagic acid kunye ne-metabolites yazo efunyenweyo: Uphononongo malunga nomthombo, imetabolism, imisebenzi kunye nempilo". Uphando lokutya lwamazwe ngamazwe. 44 (5): 1150–1160. doi:10.1016/j.foodres.2011.04.027.
 Johanningsmeier SD, Harris GK (2011-02-28). "Igromegranate njengokutya okusebenzayo kunye nomthombo wesondlo". Uphononongo loNyaka lweNzululwazi yoKutya kunye neTekhnoloji. 2 (1): 181–201. doi:10.1146/annurev-ukutya-030810-153709. PMID 22129380.
I-Han QA, i-Yan C, i-Wang L, i-Li G, i-Xu Y, i-Xia X. I-Urolithin A inciphisa i-ox-LDL-induced endothelial dysfunction ngokuyinxenye ngokumodareyitha i-microRNA-27 kunye ne-ERK / PPAR-γ indlela. Mol Nutr Ukutya Res. 2016;60(9):1933-1943. doi:10.1002/mnfr.201500827.
I-AASraw ngumenzi oqeqeshiweyo we-Urolithin A (UA) powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho elandelekayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye ne-wholesale ziyamkeleka.Wamkelekile ukuba ufunde ulwazi olungakumbi malunga ne-AASraw!
Inzuzo ephezulu ye-15 Winstrol Okufuneka Uyiqonde Ngaphambi Ukuthenga i-Winstrol Online
Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6
Ngaba iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lwezihlunu? Uphengululo Olumnandi [ENTSHA]